घट्यो खाने तेलको मुल्य, कुन तेलको मुल्य कति ? – Ap Nepal
घट्यो खाने तेलको मुल्य, कुन तेलको मुल्य कति ?
काठमाडाैं / पछिल्लो एक साताबीचमा खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २० देखि २५ रुपियाँ घटेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन बढाएका कारण मूल्य घटेको दा’बी गरेको छ ।
बजारमा तेलको भाउ घटेको हल्ला चले पनि आमउपभोक्ताले घटेको मूल्यको महसुस गर्न भने नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनु’सन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले उद्योगमा मात्रै मूल्य घटेर उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिन नपाउने भएकाले तेलका अन्य लियरमा पनि अनु’गमन हुनुपर्ने बताए । यो ख’बर आ’जको गो’रखापत्र दैनि’कमा छापि’एको छ ।
Prevकार्यक्रम लाल मोहर “आज यसरी चर्को रुपमा आवाज बुलन्द गर्नकै लागि म केही दिन यता नबोलेको हो,” रमेश प्रसाईं (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextनिशा घिमिरेको आँखाबाट आँसु झर्छ ,स्वास्थ्यमा सुधार ,यस्तो छ पछिल्लो अवस्था (हेर्नुस् भिडियो )
अक्सिजन लेभल घटेपछी अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुनः अस्पताल भर्ना.